कोरोना संक्रमित अमिताभलाई अचानक के भयो ? रोक्न सकेनन् आँशु | BBM WORLD TV
कोरोना संक्रमित अमिताभलाई अचानक के भयो ? रोक्न सकेनन् आँशु
Posted By: bibekon: In: मनोरञ्जन, समाचार
दुई साता अस्पताल बसेर बलिउड सुपरस्टार अमिताभ बच्चनका बुहारी र नातिनी सोमवार डिस्चार्ज भएका छन् । उनीहरुले दुई साता पछि कोरोना जितेका हुन् । अघिल्लो आइतवार कोरोना पुष्टि भएपछि उनीहरु मुम्बईको नानावाती अस्पताल भर्ना भएका थिए । बलिउड सुपर स्टार अमिताभका परिवारमा पत्नी जया बच्चन वाहेक सबैलाई कोरोना पुष्टि भएको हो ।